Maalintii Tobnaad Banaanbaxyo ka socda wadanka Lubnaan. – Radio Alfurqaan | Xarunta Wararka Sugan
Maalintii Tobnaad Banaanbaxyo ka socda wadanka Lubnaan.
On Oct 26, 2019 373 0
Waxaa aad usii xoogeysanaya banaanbaxyada ka socda wadanka Lubnaan, kuwaas oo ay dhigayaan dadka ku nool halkaas, kagana soo horjeedaan xukuumadda talada heysa iyo dhamaan Siyaasiyiinta wadanka.
Magaalada Beyruut ee caasimadda Lubnaan ayay ka dhacyaan banaanbaxyada ugu xoogan, waxaana fagaarayaasha waaweyn ee ku yaala bartamaha magaalada isugu soo baxay kumanaan dad ah, oo isuga qeybaha kala duwan ee bulshada.
Banaanbaxyadan oo galay maalintii Tobnaad ayay dadku waxay si cad u dalbanayaan iney is casisho xukuumadda uu hogaamiyo Sacad Al-xariiri, iyo dhamaan siyasiyiinta matala axsaabta kala duwan ee ka jirta wadankaas.
Waxay dadku sheegyaaan in dhaqaale xumida ka jirta wadanka iyo musuq maasuqa ragaadiyay hay’adaha kala duwan ee xukuumadda ay sabab u yihiin madaxda, oo qasnadahooda gaarka ah ka buuxsaday dhaqaalaha shacabka.
Magaalada Dharaabulis ee dhacda wuqooyiga Lubnaan ayaa kamid ah magaalooyinka kacdoonada xoogani ka socnayaan, waxaana fagaaraha weyn eek u yaala bartamaha magaalada uu isku bedely hooy ay deganyihiin kumanaan kacdoon wadayaal ah.
Magaalada Sayda ee iyaduna dhacda koonfurta wadanka ayaa kamid ah magaalooyinka ee ay ka socdaan banaanbaxyada, waxay maalintii tobnaad reer Saydaa dalbanayaan in dowladdu is casisho, islamarkaana maxkamad lasoo taago qaar kamid ah masuuliyiinta wadanka.
Maalintii shalay oo jimco ahayd ayaa waxaa la dareemayay iney dadka dhigaya banaanbaxyada ay aad usoo kordheen, waxaana salaaddii Jimcaha kadib la arkayay dadyow aan cadadooda la qiyaasi Karin oo ku cel celinayay halkudhigyo ka dhan xukuumadda iyo dhamaan siyaasiyiinta wadanka.
Dadka ka muuqda bananabaxyada waxaa kamid ah Aqoonyahannada iyo ardeyda Jaamacadaha, waxayna sheegeen iney ka daaleen musuq maasuqa, markanna la gaaray xilligii la maqli lahaa hadalka shacabka Lubnaan.
Waxaa gebi ahaanba fashilmey isku dayo dhowr ah oo ay qaadey xukuumadda uu hogaamiyo Sacad Al-Xariiri, kuwaas oo lagu doonayay in lagu dejiyo carada shacabka, waxayna dadku sheegayaan iney ka daalleen ballanqaadyo aan waxba ka jirin.
Hogaamiyaha shiiciga ee ururka Xisbullaah isku magacaabay Xasan Nasrallaah ayaa kalimad uu jeediyay wuxuu ku sheegay in dadka banaanbaxyada dhigaya ay soo abaabuleen safaarado shisheeye oo ku yaala wadanka.
Hadlakas ayaa waxaa si caro leh uga jawaabay shacabka Lubnaan, kuwaas oo sheegay in kacdoonkooda uu yahay mid ay iyagu soo abaabuleen, islamarkaana jirin dowlad dhabarka ka taagan.
Ra’iisul wasaare Sacad Al-Xariiri iyo madaxweyne Meshal Coon ayaa dhowr jeer yeeshey kulamo ay warbaahintu dibad joog ka ahayd, lamana oga waxyaabaha ay isla meel dhigeen.
Waxaa la qiyaasi karaa in haddii kacdoonka Lubnaan uu sii socdo ay xukuumadda Sacad Al—xariiri is casisho, ama in reer galbeedka iyo dowladaha dhabarka kataagan xukuumadda Lubnaan ay soo maleegaan qorshayaal kale, balse rajada ay muujinayaan Aqoonyahannada Islaamiga ayaa ah in kacdoonka Lubnaan uu noqdo mid kheyreed, xisaabaad badanna isku dhex yaaciyo, faraj iyo wanaagna u noqda muslimiinta ku dulman Shaam.